Seamless Blank Ingaphakathi Lendlu - Imagazini yoyilo
Ingaphakathi Lendlu Le yindlu yokubonakalisa indlela yokuphila eyahlukileyo yendwendwe, eyigrafiki yoyilo kunye nekhaya labarhwebi. Umqambi ubonelela ngezinto zendalo ukubonisa izinto ezithandwa ngumhambi kunye nokugcina iindawo ezingenanto ukuzalisa izinto zelungu losapho. Ikhitshi liziko lendlu, ekhethekileyo yenzelwe ukujonga ukubuka iindwendwe kunye nokuqinisekisa ukuba abazali bayabona naphi na. Indlu ifakwe igreyiti emhlophe egudileyo yomgangatho ongaphantsi komhlaba, umzobo wamaminerali wase-Italiya, iglasi ebonakalayo, kunye nelahleko yomgubo omhlophe ukubonisa iinkcukacha ezihombisayo.
Igama leprojekthi : Seamless Blank, Igama labayili : Tienyu Wu, Igama lomthengi : TYarchistudio.
Indawo yangaphakathi kunye noyilo lomboniso
Ingaphakathi Lendlu Tienyu Wu Seamless Blank